Nvidia dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny kaody momba ny maody GPU ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 12/05/2022 22:51 | About us
Nvidia fanambarana farany fa nisafidy ny hamoaka ny kaody ianao Amin'ireo maodely kernel an'ny mpamily azy dia nanambara ny orinasa omaly fa hanao ny mpamily Linux ho an'ny GPU azo alaina ho loharano misokatra, manomboka amin'ny version R515, mampiasa lisansa roa GPL sy MIT.
Nambara ny kaody loharano ho an'ny maody kernel dia ho hita ao amin'ny tahiry antsoina hoe "NVIDIA Open GPU Kernel Modules" ao amin'ny GitHub, fa amin'izao fotoana izao dia ny kaody ho an'ny GPUs foibe data ihany no heverina ho vonona amin'ny famoahana ny famokarana. Ny GPU GeForce sy Workstation dia heverina ho "kalitao alpha" amin'izao fotoana izao.
Nilaza i Nvidia fa ny code edia tsy ao anaty boaty amin'ny Turing sy Ampere family data center GPUs, taorian'ny famoahana tsikelikely ny rafitra fanaraha-maso ny GSP tamin'ny taon-dasa. Izy io dia nosedraina tamin'ny karazan'asa maro isan-karazany mba hiantohana ny fampifanarahana ny endri-javatra sy ny fampisehoana miaraka amin'ny mpamily kernel-mode proprietary, saingy mitondra endri-javatra vaovao ihany koa izy, toy ny rafitra DMA-BUF amin'ny fizarana buffers eo anelanelan'ny fitaovana sy ny subsystems, ho tonga ao aminy. miaraka amin'ny maritrano Hopper.
Na iza na iza mampiasa GPU miaraka amin'ny maritrano mialoha ny Turing dia tokony hanohy hampiasa ireo mpamily manana fananana taloha. Mazava, iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra avy amin'ny Nvidia rehefa manokatra ny kaody loharano ho an'ireo mpamily ireo dia ny fanatsarana ny fanohanan'ny GPU sy ny fiasa ho an'ny supercomputers ary ivontoerana data lehibe. Saika ny supercomputers lehibe rehetra dia mampiasa dikan-teny Linux sasany, ary ny fananana mpamily loharano mihidy dia mety tsy tian'ny olona tompon'andraikitra amin'ireo fametrahana ireo.
Ho an'ny olona, ​​tsy dia rosy loatra ny sary amin'izao fotoana izao, satria ny module kernel monolithic efa lany tamin'ny tompony ihany no heverina ho kalitao tsy alfa. Araka ny filazan'i Nvidia, ny fanatsarana dia andrasana mandritra ny taona. Ny mpamily open source vaovao dia mandeha amin'ny firmware mitovy amin'ny mpamily taloha ary mitovy amin'ny stacks mode mpampiasa, toy ny CUDA, OpenGL, ary Vulkan. Fanampin'izany, nilaza ny orinasa fa ny fanamboarana natolotry ny vondrom-piarahamonina dia hojerena hampidirina amin'ny famoahana mpamily ho avy.
Miaraka amin'ny fisian'ny fonosana mitambatra tanteraka sy ny kaody loharano, ny mpitantana ny fizarana dia ho afaka hampiditra mora kokoa ny mpamily ao amin'ny fitahirizana rindrambaiko.
Canonical sy SUSE dia voatonona ho mpamorona izay afaka mampiditra modules ankehitriny ny voany misokatra amin'ny fizarana azy ireo.
"Ny maody GPU open source vaovao an'i Nvidia dia hanatsotra ny fametrahana sy hampitombo ny fiarovana ho an'ny mpampiasa Ubuntu, na mpamorona AI/ML, mpilalao na mpampiasa informatika rahona," hoy i Cindy Goldberg, filoha lefitry ny Silicon Alliances. ao amin'ny Canonical.
Tokony ho tonga ao amin'ny Ubuntu 22.04 LTS ny mpamily vaovao ao anatin'ny volana vitsivitsy. Nvidia dia niara-niasa tamin'ny Canonical sy SUSE, ary koa ny Red Hat, mba hanatsarana ny fametrahana fonosana ary hamorona modely fanohanana tsara kokoa ho an'ny mpanjifa. Manome teny manodidina bebe kokoa, ny talen'ny Red Hat Christian Schaller dia nilaza tao amin'ny lahatsoratra bilaogy fa ny mpihazona ny mpamily Nouveau (tetikasa hamokarana mpamily maimaim-poana ho an'ny karatra grafika Nvidia amin'ny alàlan'ny reverse engineering) sy ny kernel dia nihaona tamin'i Nvidia nandritra ny volana lasa.
"Ny ampahany amin'ny kernel ihany, maro amin'ireo mpamily grafika maoderina no ao amin'ny firmware sy ny espace mpampiasa ary mihidy foana ireo." Saingy midika izany fa manana mpamily kernel Nvidia isika izao izay hanomboka hampiasa API GPL irery ao amin'ny kernel Linux, na dia tsy handany API izay tsy nampiasain'ny mpamily teo aloha aza ity famoahana voalohany ity. Nanoratra i Schaller. Nanampy ity farany fa hijanona eo amin'ny toerany ny mpamily Nouveau sy binary efa misy an'i Nvidia, na dia mivoatra aza ny mpamily open source vaovao.
Raha fintinina, ity no dingana ankehitriny amin'ny ezaky ny mpamily kernel open source Nvidia. Na izany aza, loharanom-baovao maro no mitatitra fa Nvidia dia nanamarika tamin'ny alarobia fa "ireo modules kernel misokatra ivelan'ny hazo dia dingana iray mankany amin'ny fanohanana Linux tsara kokoa."
Farany, raha te hijery ny kaody loharano navoaka ianao dia azonao atao izany ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nvidia dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny kaody ny mody GPU ho an'ny Linux
Tian'ny IBM ny supercomputers quantum-ny mba hihazakazaka amin'ny 4000 qubits mahery